Taf'Ita | FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA – PTASO : Hahita mangirana ny any Atsimo Andrefana - Taf'Ita
Hotanterahina any Atsimo Andrefana ny tetikasa PTASO. Hajoro ny orinasa hikarakara sy hanodina ny vokatra any an-toerana. Hahazo asa fivelomana ny mponina.
Tonga ny anjaran’ny faritra Atsimo Andrefana. Nanambara ny fanatanterahana ny tetikasa « PTASO (Projet de développement de la zone de transformation agri-industrielle dans la région Sud-Ouest) », i Razafindravahy Egdard, Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, sy ny Varotra ary ny Fanjifana, ny Sabotsy 19 Febroary 2022. Fampandrosoana ny toeran’ny orinasa fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena sy fiompiana, ny tetikasa.
Haorina ao Ankorongoa, manakaiky ny làlam-pirenena faha-7, miditra an’i Toliara, ity toeram-panodinam-bokatra lehibe ity. Hahasahana velaran-tany 107 000 ha izany. Hivelatra amina velaran-tany 120 ha ny orinasa. Natao hampisondrotra ny sehatra mifandray amin’ny fambolena ny « PTASO ». Voakasika amin’izany ny fambolena sy fiompiana madinika, ny famokarana, ny fanatsarana ny fitaovana, ny fampitomboana ny fahaiza-manaon’ny mpisehatra samihafa, ny fanangonam-bokatra sy ny fanodinana ary ny fitadiavana làlam-barotra. Hatsangana ao Ankinilaoka sy Tanandava ny Ivotoerana avo lenta momba ny fandraharahana ara-pambolena.
Anisan’ny toerana notetezin’ny Minisitra, tamin’ny herinandro, ny faritra Atsimo Andrefana. Nalamina ny famatsiana ny entana ilain’ny mponina andavan’andro, taorian’ny rivodoza. Nojereny ny asa fandraharahana sy ny fihariana. Hananganana orinasa, ohatra ao Ambatolampy, fantatra amin’ny famokaram-bary sy ovy ary mpanao vilany. Torak’izany koa ao Ambositra, izay mpamokatra voatabia betsaka. Ary koa i Sakaraha, miavaka amin’ny fananana vato sarobidy. Harenina indray ny MAGRAMA (Marbra sy Granita eto Madagasikara), tao Ambatofinandrahana.
Tanjona ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana ny 80%-n’ny Malagasy. Mahazo vahana ny tsy fanjarian-tsakafo. Be loatra ny fanafarana entana avy any ivelany. Nahatratra eninjato tapitrisa Dolara izany, ny taona 2018. Maro be ny vokatra eny an-toerana no tsy tafavoaka, noho ny haratsian-dàlana, na ny tsy fisian’ny mpanodina sy ny tsena. Tsy misy fomba sy fitaovana hitahirizana azy. Lasa amidy mora ny vokatra. Maty antoka ny mpamokatra, mihena ny risi-pony. Hanatrarana ny fahatarana any Atsimo Andrefana ny « PTASO ». Hamorona asa mivantana miisa 152 000 izany. Miisa 460 000 kosa no hahazo tombontsoa an-kolaka, indrindra ny vehivahy (55%). Mponina miisa 1 400 000 mahery, amina distrika enina, mizara amina kaominina 81 no hiala amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Nambara tamin’ny fomba ofisialy, tamin’ny Desambra 2020, ny « PTASO ». Vatsian’ny Banky Afrikana ho an’ny fampandrosoana 25 000 000 Dolara, na zato miliara Ariary izany. Nanomboka ny taona 2021, ka haharitra dimy taona ity tetikasa ity. Hatsangana amin’ny taona 2023 ny fotodrafitrasa rehetra.
Vaccination contre la Covid-19 : Moins de vacciné, chute économique.